Fambara 11 Manimba ny fifandraisanao amin'ny fiankinan-doha amin'ny mpiara-miasa aminao (+ Fanamboarana 6) - Fifandraisana
Fambara 11 Manimba ny fifandraisanao amin'ny fiankinan-doha amin'ny mpiara-miasa aminao (+ Fanamboarana 6)
Mampiankin-doha ny telefaona - ZAVA-MISY!
Namboarina toy izany izy ireo.
Ny loko marevaka eo amin'ny efijeryo sy ny volom-bavanao rehefa mahazo lahatsoratra na antso ianao dia natao hanomezana anao ny dopamine - ilay fanafody mahafaly.
Io fahafinaretana io ihany no manosika antsika hitady sakafo, fanaovana fanatanjahan-tena, ary firaisana ara-nofo… ary fantatsika rehetra fa mampiankin-doha an'ireo.
sonia ny vadinao tsy tia anao intsony
Tsy mahagaga raha maro amintsika no variana amin'ny telefaonintsika.
Natao ny fampiharana mba hampitomboana ny valisoa ara-pientanam-po, noho izany dia tianay ny hampiasa azy ireo bebe kokoa.
Ny telefaona dia mitondra tombony maro, fa ny fatiantoka lehibe dia mety ho vokany eo amin'ny fifandraisantsika manokana.
Ny fidirana amin'ireo fitaovana ampiasaintsika dia midika fa tsy tena eo isika amin'izao fotoana izao.
Mifantoka amin'ny fitazonana fifandraisana virtoaly amin'ireo olona tsy ao amin'ny efitrano izahay, na amin'ny alàlan'ny mailaka, Whatsapp, na Instagram tianao.
Izahay dia tsy manome ny saintsika feno an'ireo izay tena miaraka, ara-batana.
Na dia natao ho tia an'io olona io aza isika.
Na dia azonao atao aza ny mitazona ny fampiasanao finday avo lenta ho salama ara-pahasalamana dia mila roa ny tango.
Ny sakaizanao tsy tapaka miditra ao anaty fitaovana dia mety hiteraka karazana olana eo amin'ny fifandraisana. Afaka manomboka mahatsapa mora foana ianao fa manome lanja ny fiainany virtoaly kokoa noho izy ireo aminao.
Ny fahatsapana azonao rehefa snub anao amin'ny telefaoninao, fantatra amin'ny anarana hoe 'phubbing', dia maharary, sa tsy izany?
Fampitandremana 11 dia famantarana fa nanjary fiankinan-doha ny fampiasana ny smartphone
Raha miraikitra amin'ny findainy foana ny olon-tianao ary mieritreritra ianao fa mety hisy vokany ratsy eo amin'ny fifandraisanareo izany, ireo famantarana ireo dia mampiseho fa tena manana zavatra mampatahotra anao ianao.
1. Tsy miraharaha anao izy ireo
Very izy ireo eo amin'ny tontolon'izy ireo virtoaly rehefa eo amin'ny findainy izy ireo ka miova tanteraka. Manantena ny olona iray fa tsy izy ireo tsy miraharaha anao tsy amin'antony rehefa miresaka amin'izy ireo ianao, nefa toa tsy maheno anao mihitsy izy ireo indraindray.
2. Mahamarika izany
Tsy ianao irery no nahatsikaritra fa toa voafatotra amin'ny finday avo lenta ny olon-tianao. Ny fianakaviany na ny namany (na mbola ratsy kokoa aza, ny fianakaviana na namana) dia nanao fanamarihana momba izany ihany koa.
3. Variana izy ireo
Tsy mahita olana amin'ny fitsipahana amin'ny alàlan'ny Twitter na Instagram izy ireo rehefa miresaka aminao izy ireo na raha toa ka mifantoka amin'ny zavatra hafa na miasa izy ireo. Toa tsy tsapan'izy ireo fa nanao azy mihitsy aza izy ireo.
Efatra. Tsy mifona izy ireo
Amin'ny ankapobeny dia fahalalam-pomba mahazatra ny miala tsiny amin'ny olona iray raha sendra miresaka aminy ianao ary mila manamarina hafatra tonga. Tsy mieritreritra ny sakaizanao fa ilaina ny fialan-tsiny.
5. Mora saro-kenatra izy ireo
Ny voka-dratsin'ny vanim-potoanan'ny efijery dia ny fanentanana antsika rehetra tsy tapaka ary afaka mahatsapa ho twitchy raha tsy manamboatra ny finday. Mihorohoro izy ireo isaky ny tsy mijery ny telefaoniny.
6. Mahazo fanahiana amin'ny fisarahana izy ireo
Miantso an-telefaona izy ireo hatramin'ny fotoana nifohazany hatramin'ny farany tamin'ny alina, ary raha mijanona tampoka ny fiasan'izy ireo na tapaka, dia sosotra izy ireo noho izany ary mitaintain-doha fa tsy hahita zavatra izy ireo.
7. Tsy hitan'izy ireo ny olana
Ny olana ekena dia olana iray izay efa ho voavaha, saingy tokony handeha ny lakolosy fampitandremana raha toa ka tsy mahatsapa ny zava-mahadomelina.
8. Voasedra izy ireo amin'ny alàlan'ny haino aman-jery sosialy sy ny mailaka
Ny fotoana laniny amin'ny findainy rehetra dia mahasambatra azy ireo. Ny tambajotra sosialy dia midika hoe mandany ny androm-piainany izy ireo mampitaha ny tenany amin'ny hafa .
Ny mailaka tonga amin'ny ora rehetra amin'ny andro dia midika hoe miova sy amin'ny fomba fiasa foana izy ireo. Manelingelina ny fotoananao kalitao ny toe-tsain'izy ireo ratsy.
8. Mahatsiaro ho voilika ianao
Raha toa ny mpivady toa liana lalandava amin'ny fitaovana elektronika noho izy ireo aminao dia ara-dalàna tanteraka ny mahatsiaro voadona na nolavina.
Matetika ianao no mahatsiaro ho snubbed raha manatratra ny telefaonin'izy ireo rehefa mandany fotoana miaraka ianao ary midika izany fa manomboka mibontsina ao ambany ny fahatsapana lolom-po.
9. Mijaly ny fiainanao manao firaisana
Miditra am-pandriana ny sakaizanao ary manomboka mamaky ny findainy izay midika fa tsy mieritreritra be loatra momba ny fihodinana sy ny maha-akaiky azy izy ireo.
Olona maro be mampanahy aza no niaiky fa nanamarina ny telefaoniny REHEFA manakaiky ny olon-tiany izy ireo , izay famantarana mampatahotra indrindra fa ny fifandraisanareo dia manimba ny fiankinan-doha ataon'izy ireo.
10. Maka fialofana amin'ny findainy izy ireo amin'ny fotoana tsy ampoizina
Isaky ny manomboka miresaka momba ny zavatra matotra ianao na misy fahanginana tsy ampoizina, dia manatratra ny findainy izy ireo ho toy ny lamba firakotra fampiononana.
11. Io no antony lehibe miady
Raha tsy noho ny fahazaran-telefaonin'izy ireo dia tsy heverinao fa hanao bicker mihitsy ianao, fa manana adihevitra mifandraika amin'ny teknolojia foana ianao.
Famerenana 6 azo ampiharina hanampiana amin'ny adiresy ny fiankinan-doha amin'ny telefaona mpiara-miasa aminao
Raha nahatsikaritra ianao fa meloka tamin'ny fihetsika voalaza etsy ambony ny namanao dia aza kivy.
Azo antoka fa tsy afaka mandeha Torkia mangatsiaka tanteraka ianao toa ny alikaola na sigara, satria mila telefaona finday ianao amin'ny tontolon'ny maoderina, saingy azo tsaboina ny fiankinan-doha amin'ny telefaona raha apetrakao ao am-ponao ny sainao.
Ireto misy fomba vitsivitsy hanampiana amin'ny fanamboarana zavatra sy hamerenana tsara ny fifandraisanareo.
1. Avoahy misokatra ny raharaha
Voalohany, mila milaza ny marina amin'ny vadinao ianao momba ny fahatsapanao ny fiankinan-doha amin'ny findainy.
Raha tsapan'izy ireo fa manana ahiahy marina momba ny fifandraisana ianao vokatry ny fahazaran-telefaon'izy ireo, dia mety ho ny antony manosika ilainy hanovana.
2. Manàna fotoana sy faritra tsy misy haitao
Heveriko fa afaka manaiky daholo isika fa ny famadihana ny findaintsika amin'ny zavatra voalohany amin'ny maraina sy ny fisitrihana mivantana ho any amin'ny mailaka miasa dia tsy fomba tsara hanombohana ny andro.
Ny fandefasana ny Facebook amin'ny zavatra farany amin'ny alina raha eo am-pandriana dia tsy fomba tsara hampiatoana azy, na izany aza, satria izany hazavana mamirapiratra rehetra izany dia voaporofo fa manelingelina ny torimaso .
Raha ny fijerin'ny fifandraisana, ny fanaovana ny ora iray alohan'ny tsy fatoriana am-pandriana sy ny tsy famelana ny fitaovana ao amin'ny efitrano fandriana dia mety hidika hoe miresaka sy hikasika kokoa ianao rehefa mahazo eo anelanelan'ny lambam-pandriana.
Tsara ihany koa ny mametraka fitsipika fa tsy misy mikasika ny fitaovana iray rehefa misakafo hariva ianao, ohatra, hanomezana anao fotoana hananana resaka marina.
3. Manolora fanovana vitsivitsy amin'ireo toe-javatra
Soso-kevitra amin'ny mpiara-miasa aminao fa mety te-hanana fahazarana amin'ny famonoana ny fampandrenesana ho an'ny zavatra rehetra izy ireo ankoatry ny antso an-tariby maika raha toa ianao ka manana fotoam-panambadiana na fianankaviana tsara.
Raha tsy mihetsiketsika na beep ny telefaonin'izy ireo, dia azo inoana kokoa fa afaka manadino izany izy ireo ary mifantoka amin'ny fanatrehana azy ireo.
4. Ataovy kilalao io
Raha any ianao hisakafo na hisotro miaraka amina vondrona sakaiza iray, dia asao ny tsirairay hametraka ny telefaoniny eo afovoan'ny latabatra, mitodiha. Ilay olona voalohany namaky sy naka ny findainy dia nividy zava-pisotro maromaro.
5. Manomeza ohatra
Tsy mampaninona ahy ny filokana fa na dia manelingelina anao aza ny fampiasana finday avoakan'ny namanao dia azonao atao amin'ny fotoana kely kokoa amin'ny efijery ny tenanao.
Ataovy mazava amin'ny mpiara-miasa aminao fa apetrakao ny telefaoninao rehefa miaraka aminy ianao mba hahafahan'izy ireo mifantoka irery.
Miezaha mandamina am-pahamendrehana ny fotoana an-telefaonanao, angamba amin'ny alàlan'ny fampiasana fampiharana fampiharana toy izany fotoana na toerana , ary lazao amin'ny namanao ny zavatra ezahinao hatao.
Ny fahitana anao manandrana manova fanovana raha toa ianao ka mandany fotoana kely kokoa amin'ny telefaona noho izy ireo dia tokony hahatsapa ny vadinao fa mila miatrika ny olany izy ireo.
6. Mahazoa fifandraisana akaiky
Raha mahazo izany aingam-panahy izany isika avy amin'ny finday avo lenta izay ataontsika rehefa mifandray amin'ny olona hafa isika, andramo manatsara ny haavon'ny fifandraisana akaiky .
Na mikarakara am-pitiavana bebe kokoa ny vadinao fotsiny ianao, mamihina azy bebe kokoa, na manakaiky ny takelaka misimisy kokoa dia asehoy azy ireo fa ianao dia fomba tsara lavitra kokoa hahavoa ny dopamine hitana fa ny efijery telefaona.
Raha eo amin'ny telefaonin'izy ireo foana ny olon-tianao ary manimba ny fifandraisanao izany dia manana fitaovana hamantarana ny fiankinan-doha aminy ianao ary manampy amin'ny fanovana tsikelikely ny fihetsik'izy ireo mba hahafahanao misoroka olana hafa.
Mbola tsy azonao antoka ve ny fomba hanatonana ireo olan'ny findainao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Tanjona fifandraisana 9 Tokony hapetraka isaky ny mpivady
Rehefa miditra fifandraisana vaovao dia ialao ireo fiandrasana tsy azo antenaina 7 ireo
Ny zavatra tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy: zavatra lehibe telo izay mahatonga ny vady ho fitaovana
Famantarana lehibe 6 no hitan'ny mpiara-miasa aminao ho safidy fa tsy laharam-pahamehana
Azonao atao ve ny manamboatra fifandraisana iray lafy na tokony hatsahatrao?
ny fomba fanamboarana lainga ao anaty fiarahana
dia mpanefy vy sy ny zanany lahy
tiako loatra ity lehilahy ity
inona no hatao rehefa mitsoka amin'ny fiainana ianao
ny fomba fandraisana azy indray andro